Fanadihadiana :: Naverina ny fomba fisehon’ny fanafihana teny Itaosy • AoRaha
Fanadihadiana Naverina ny fomba fisehon’ny fanafihana teny Itaosy
Niantrana teny amin’ny Cité Itaosy tao amin’ny “Cash point Airtel” nitrangan’ny fanafihan-jiolahy, afak’omaly tolakandro, ny polisy sy ny zandary, omaly maraina. Nasaina naverin’ireo niharam-boina ny fisehon’ny fanafihana, nanomboka tamin’ny fomba nidiran’ireo olon-dratsy hatramin’ny nivoahany sy ny fihetsika rehetra nataon’izy ireo.
“Efa miroso amin’ny fanadihadiana lalina tamin’iny tranga iny ny mpanao famotorana. Andrasana ny vokatr’izany sy ny hiakarany eny amin’ny Fitsarana”, hoy ny Contrôleur Général de Police Randrianarison Fanomezantsoa Rodellys, minisitry ny filaminam-bahoaka.
Tsy misy fakan-tsary miafina ao amin’ilay fivarotana lasibatra. Lehilahy roa nisaron-tava no nanao ny asa ratsy ka nandroba vola dimy tapitrisa ariary niaraka tamin’ny finday.
“Tonga aloha teny an-toerana izahay rehefa naheno ny filazana. Niteny ny olona teo ivelany fa mbola ao anatiny ao ireo jiolahy sady mitana takalon’aina. Niezaka niditra tao amin’ilay fivarotana izahay. Vehivavy iray no tratra tao. Mety efa tafaporitsaka, nialohan’ny nahatongavanay ireo mpanafika”, araka ny nambaran’ny zandary eny Itaosy.
Milaza ny handray fepetra hisorohana ny tsy fandriampahalemana sy ny asan-jiolahy natetika niseho, tato ho ato, ny minisitry ny Filaminam-bahoaka. “Tsy ny resaka fanafihana “cash point” ihany no hosorohina fa hojerena akaiky ny fiarovana ny vahoaka. Efa anaovana fisafoana mafy iny amin’ny faritra 67 Ha sy Itaosy iny. Ezahina horakofana polisy ny faritra rehetra, indrindra any amin’ireo toerana ahiana”, hoy hatrany hoy ny Contrôleur Général de Police Randrianarison Fanomezantsoa Rodellys.
Ankadindratombo Lehilahy, 25 taona, maty voatsindron’ antsy
Ahiahina hala-jaza Ankizilahy, 12 taona, nalaina an-keriny teny an-tsaha
Fandrobana vola tamina fiara Voatifitra teo amin’ny tendany ny mpamily
Lozam-pifamoivoizana :: Vehivavy maty voafaokan’ny môtô
Vono olona tany Toliara :: Hiakatra Fitsarana ny mpiambina ilay lisea nahitana fatin-jazalahy
Fifehezana aretim-biby Kisoa enim-polo mahery nodorana sy nalevina
Herisetra tamim-behivavy Any am-ponja vonjimaika ilay rain-janak’i Tahisy
Ahiahy tafikan-taova Lehilahy fito nogadraina sady enjehina tamin’ny halatra voamaso